OWESILISA UYEKA UMSEBENZI WOBUNJINIYELA UKUMBA AMATHUNA NOKWENZA IMALI ENINGI | Scrolla Izindaba
OWESILISA UYEKA UMSEBENZI WOBUNJINIYELA UKUMBA AMATHUNA NOKWENZA IMALI ENINGI
Ngowezi-2016 uSinethemba Marali waselokishini laKwaNoxolo e-Port Elizabeth washiya umsebenzi wakhe wokuba ngunjiniyela kagesi ukuze abe ngumumbi wemigodi yomncwabo.
Ngokushesha wathola okuningi kakhulu.
Kepha selokhu i-Covid ahlasela isizwe, uSinethemba ubelokhu ethola imali!
Abakwa-Scrolla.Africa bamfica emathuneni ase-Bloemendal ngoLwesihlanu lapho ayemba khona amathuna.
“Ngisebenze iminyaka emine njengonjiniyela kagesi enkampanini yaseThekwini futhi ngangithola imali eyizi-R10 000 ngenyanga,” uyasho.
Ubaba wakhe, uMphostoli uMike Mbewu we-United Old Apostolic Church, ungumnikazi we-Mbewu Funeral Parlour.
Wabheka ibhizinisi wathi wabona ukuthi abasebenzi abamba amathuna bathola kanjani imali engama-R650 ithuna ngalinye. “Benza imali eningi kusuka ngoLwesithathu kuya ngoMgqibelo ekuseni,” uyasho.
Ngakho-ke wasishaya indiva iseluleko somndeni wakhe – ngowezi-2016 washiya umsebenzi waqala ukumba amathuna enkampanini kababa wakhe.
Ngowezi-2017 wajoyina umfowabo owayekade eyipantinti futhi waqala inkampani yokumba amathuna eyathola izinkontileka nabangcwabi abakhulu
“Kusukela lapho asikaze sibheke emuva,” uyasho.
Ubaba wezingane ezimbili oneminyaka engama-38 uthi selokhu izidingo ze-Covid zikhuphukile baqashe abasebenzi abane.
Kamuva nje bebemba okungenani amathuna angama-30 ngeviki.
“Sengize ngazithengela nomakhalekhukhwini wemali eyizi-R12,000 kodwa ngesikhathi ngiwunjiniyela ngangingenzi imali eyeqile kweyizi-R10,000 ngenyanga,” kusho uSinethemba.
Umfowabo, u-Ayanda Tshakweni, ungubaba wezingane eziyisikhombisa futhi uphinde abe ngumphostoli. Waya ejele lapho eneminyaka engama-34, waba ngumKristu ozelwe kabusha futhi wajoyina iqembu lezigelekeqe elizibiza ngama-28
Ngaphambi kokuba abambisane nomfowabo ebhizinisini lokumba amathuna, uthi wathola imali eyi-R1 500 yokuthenga nokuthengisa izikhoqokhoqo. Naye ubengumashonisa. “Kodwa manje ngihola imali eyizi-R10,000 ngeviki uma kumatasa kakhulu nemali eyizi-R7,000 ngeviki ngezinsuku ezijwayelekile. Ngithenge indlu ebiza imali engama-R120,000 – hhayi ngesikweletu.”